Agara m na Chamber of Commerce dị na mpaghara a na mgbede iji kwurịta mmeghari ndị ọhụrụ. Islọ ahụ bụ nzukọ dị egwu, mana ọ bụ ezigbo ihe atụ nke ọrụ ebe mmegharị bụ ihe obi nke nzukọ ahụ. Ekwenyesiri m ike na ụlọ ahụ nwere ike ịkwụsị ego na ndị na-esonye n'afọ mbụ. Agbanyeghị, mgbe afọ ahụ gachara, uru ha na - abawanye - na uru ọ bara na Chamber Chamber anaghị ala.
Voila! Akwụkwọ ozi Google. Otu enyi m, Dale, kesara mpempe akwụkwọ m n’izu ụka ole na ole gara aga, echetakwara m mgbe ọ gwara m ka m lelee ya. O were ruo abalị a, mana m mere na ọ dị mma. Mgbe ị debere mpempe akwụkwọ gị, ị nwere ohere ịkpọ ndị folks ka hazie ma ọ bụ lelee mpempe akwụkwọ.